Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Super Bowl Halftime: Gịnị ka Gary Grey rọrọ nrọ ugbu a?
Site na mgbe a mara ọkwa Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, na Kendrick Lamar dị ka ndị na-eme ihe nkiri Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show, ụwa na-echere ịhụ ihe na-esote. Ugbu a, na mmekorita ya na onye na-ese ihe nkiri F. Gary Gray, Pepsi emepụtala ihe nkiri Halftime Show trailer nke isiokwu ya bụ oku na-eduga n'ihe nwere ike ịbụ nkeji iri na abụọ kacha ukwuu na ntụrụndụ egwu ụwa hụtụrụla.
Akụkọ nke Oku
Pepsi jikọrọ aka na LA nke F. Gary Gray (Straight Outta Compton, Friday, The Fate of the Furious) iji duzie ụgbọala na-adọkpụ nke na-asọpụrụ mmetụta ndị nka ise niile nwere na omenala tupu ha arụ ọrụ Pepsi Halftime Show. Oku na-apụta dị ka ihe nkiri blockbuster ike dị elu, nke sitere n'ike mmụọ nsọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ nke ihe nkiri egwu egwu egwu egwu na egwu kachasị ama ama hitmakers nke ọgbọ anyị na nwa amaala LA dị mpako, Dr. Dre, nọ n'isi. Igwe oghere na-aga ngwa ngwa n'etiti Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige na Kendrick Lamar na-akọwa njem nka na mmetụta ha n'otu n'otu. Onye ọ bụla na-ese ihe na-enweta oku site n'aka enyi ha na onye na-emekọ ihe ọnụ, Dr. Dre, ka ha gbakọọ na SoFi Stadium na Inglewood maka ihe ga-abụ ihe ngosi Pepsi Super Bowl Halftime kasịnụ.
Site na vidiyo egwu na-agbawa agbawa na ihe nkiri ọdịnala South-Central cult classic Friday na epic NWA biopic Straight Outta Compton, F. Gary Gray abụrụla megaphone maka ọdịbendị na hip hop ruo ọtụtụ iri afọ na ọ bụ olu kachasị mma iji gosipụta njem site n'okporo ámá. nke LA ka SoFi stadium n'ọnwa na-abịa. "Oku" bụ onye nwere nkà niile, onye nduzi egwu Emmy họpụtara na onye edemede na-emeri Grammy Adam Blackstone, bụ onye chịkọtara egwu egwu egwu "Rap God," "Ihe na-esote," "Ihe gbasara ezinụlọ," "HUMBLE. , "" ka bụ DRE," na "California Love."
"Mgbe ọ bụla mụ na Dre na-emekọ ihe, ọ dị ka ọ na-akara oge dị mkpa na akụkọ ntụrụndụ ntụrụndụ, site na ọrụ dị ka Friday, Set It Off, Straight Outta Compton, ruo ugbu a Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show," kesara F. Gary Gray. "Dị ka nnukwu onye ofufe, a na m ewere ya dị ka ihe nsọpụrụ na ihe ùgwù iji wuo ma mepụta oge a na ndị omenkà ise kacha ewu ewu na akụkọ egwu. Ọ bụ ihe mgbawa!”
Pepsi na-aga n'ihu na-echegharị ihe ngosi ọkara oge
Ihe ngosi Pepsi Super Bowl Halftime bụ otu oge a na-ekwukarị banyere egwu na ntụrụndụ, yana ihe karịrị nde mmadụ 100 na-ekiri ihe nkiri ahụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ihe okike nke oku a bụ akara mbụ maka Pepsi ka akara a na-ewepụta nkeji iri na abụọ kacha atọ ụtọ na egwu n'ime nnukwu mkpọsa nke ọtụtụ izu nwere ọtụtụ izu. Debuting taa na YouTube na ọhụrụ Pepsi Super Bowl Halftime Show App, 12 nke abụọ ntụpọ nke oku a ga-agbasa na mba niile na NFL Divisional na Conference playoffs na na-eduga Super Bowl LVI, na-edozi ogbo maka ihe ngosi ngosi.
"Ugbu a na anyị dị naanị izu ole na ole na-atụ anya Pepsi Super Bowl Halftime Show arụmọrụ oge niile, anyị na-eme ka ndị Fans bịaruo nso na anwansi nke ihe ga-abụ nnukwu oge na akụkọ ọdịnala pop. N'iburu n'uche usoro egwu egwu nke talent ise, anyị chọrọ ịnye ahụmịhe cinematic nke nwere ike ịsọpụrụ onye ọ bụla n'ime ndị na-ese ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma mee ememe ọrụ ha na egwu na omenala ka ha na-agbada na Los Angeles iji wepụta arụmọrụ ruo ọtụtụ afọ, "Todd Kaplan kwuru. , VP nke Marketing – Pepsi. "Ọ dị oke mkpa na anyị na-akọ akụkọ a n'ụzọ ziri ezi, yabụ anyị na ndị nwere ọgụgụ isi nke F. Gary Gray na Adam Blackstone jikọrọ aka iji wepụta mpempe ọdịnaya a nwere mmetụta. Ụlọ ụgbọala na-adọkpụ ga-adị na ngwa Pepsi Super Bowl Halftime Show yana ọtụtụ ihe nkiri dị n'azụ ihe nkiri ahụ, onyinye ndị fan, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji hụ na ndị Fans na-aga n'ihu na-enwe mmasị maka ihe ngosi ahụ n'izu ndị na-abịa. "
Site na mmalite nke oku a, a ga-edobe ọdịnaya nke a na-ahụtụbeghị mbụ na ngwa ihe ngosi Pepsi Super Bowl Halftime n'ime ụbọchị na-abịa gụnyere:
• N'azụ ihe onyonyo na vidiyo sitere na ịkpọ oku;
• Onyinye ọhụrụ gụnyere obere mbipụta Super Bowl LVI nke Dr. Dre bịanyere aka na ya;
• Mwụda ihe ịtụnanya na-egosipụta ihe nrụpụta otu-nke-ụdị sitere na oge ịse nke ndị fan nwere ike imeri gụnyere: efere ikike ngosi Halftime, set glam, pen calligraphy, na bọọdụ chess.
Ọzọ na: Marketing | Stadium | ikike | Los Angeles
Shangri-La na Make-A-Wish International na-emekọrịta ihe Marketing|
Data ọhụrụ na ọrụ nke njem na njikọ ụlọ Marketing|
Minista njem nlegharị anya Jamaica kwụsịrị mbụ na UK na Mega Marketing Blitz Marketing|
Ụzọ njem North Dakota Marketing|
Ụgbọ elu Pegasus kpọpụtara onye isi azụmaahịa ọhụrụ Marketing|
ikike Los Angeles Marketing Stadium